HGH Thailand - dzidza zvakawanda nezvekukura kwehomoni muBangkok
Growth hormone (Kukura hormone, GH, HGH, Somatotropin, Somatropin) - peptide hormone ye anterior pituitary, inoshandiswa mumitambo Nokuda kwekuumbwa kwemafupa emisero. Kukura kwehomoni kana somatotropin (kubva muchiLatin soma - muviri) ine zita rayo vaduku ivavo, inokonzera kukurumidza kuratidzika muhutano (murefu). Kukura kwaive kwakakonzerwa nekukura kwemarefu mapfupa emakumbo.
Nhamba yekutanga yekukura kwehomoni muropa ndeye 1-5 ng / ml, apo zvikomo zvingasimuka ku 10-20 uye kunyange 45 ng / ml. Yakatanga kutanga iri mu1956. Inovanzika kukura hormone mupituitary gland mukupindura zviratidzo kubva ku hypothalamus. Kazhinji, mushure memakore makumi maviri, kubudiswa kwehomoni iyi nemuviri kunoderera. Kukwegura kunoratidzika zvakananga nehuwandu hwekusunungurwa kwekukura kwehomoni. Paavhareji, mushure memakore 20, makore ose e10 muzinga wekugadzirwa kwemadonzvo ne 15%.
Kukura kwehomoni hakune kusiyana kwepabonde. Iko ndiko kuti, huwandu hwayo hwakaenzana nevarume nevakadzi. Pasinei nekuti kushandiswa kwegadzirira rine hormone yokukura, yakarambidzwa VADO (nyika inopesana Doping Organisation), HGH kugadzirira Zviripo Tairendi.
Pharmacological properties yeHGH:
- Anabolic effect - inokonzera musimba kukura
- Anti-catabolic action - inhibits musimba kuputsika
- Inoderedza mafuta omuviri
- Kuvandudza kushandiswa kwesimba
- Anotanga kuporesa
- Inobatsira yekuvandudzazve
- Inokurudzirazve kukura kwezviviri zvemukati (inrophied with age)
- Inokonzera kuwedzera kwemapfupa uye inowedzera kukura kwevechidiki kusvika kumakore e26 (kusvika pakuvharwa kwenzvimbo dzekukura), inosimbisa mapfupa
- Inowedzera huwandu hwehuga muropa
- Inosimbisa zvirwere zvemuviri
Mimwe yemigumisiro iyo mishonga inozvikonzera, asi chikamu chikuru chemigumisiro yacho inopindirana ne insulini-yakafanana nekukura IGF-1 (yaimbova yakanzi somatomedin C), iyo inobudiswa nechisimba chekuwedzera hormone muropa uye inosimudzira Kukura kwenhengo dzakawanda dzomukati. Zvinenge zvose zvinokonzerwa nekukura kwehomoni mumitambo inobatanidza nekuita kweGIG-1.
Kuchinja-kwehutano kwezera-kare mumusana wekukura kwehomoni
Kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni kunoderera nezera. Hazvisi zvishoma kune vakwegura, avo vakaderera sechinhu chekutanga, uye nguva uye marefu ezvinyorwa zvekuvhara. Nhamba yepamusoro yekukura kwehomoni inowanikwa mumakore ekutanga, marefu ekukwirira kwepamusoro pamazuva ekuyaruka kwekukura kwekukura kwepamusoro uye munguva yekuyaruka. Circadian rhythms muchivande chekuwedzera hormone:
Kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni uye mamwe mahomoni akawanda anowanzoitika uye ane zvikamu zvakasiyana-siyana mukati mezuva (kazhinji kuvharwa kwepamusoro kunowanikwa maawa ose e3-5). Nhamba yepamusoro yepamusoro inoonekwa usiku, inenge awa imwe mushure mokunge yakarara.
Kuwedzera hormone mukuvaka muviri muThailand
Pakutanga, zvirongwa zvekukura kwehomoni zvakatanga kushandiswa kune chinangwa chekurapa, zvisinei, kazhinji panguva imwechete iyo hormone yakanga yakawanda mumitambo, nekuda kwekukwanisa kwayo kuwedzera masimba uye kuderedza mafuta emuviri. Yokugadzirira kwekutanga kweHGH yaiva zvitunha zvepituitary, uye chete mu1981 yakaitwa chirwere chekare chinonzi somatotropin.
Muna 1989, hovha yakakura yehomoni yakarambidzwa neOlympic Committee. Pasinei nekuti kushandiswa kwekukura kwehomoni mune zvemitambo kunorambidzwa, mumakore gumi apfuura, kutengesa kwezvinodhaka kwakawedzera kazhinji. Chaizvoizvo, hormone inokura inoshandiswa mumitambo, kunyanya pakugadzira muviri, uko yakabatanidzwa nemamwe madawa anebolic madhiragi.
Wedzera kuonda kwemasumbu uye mafuta anopisa
Chikonzero chikuru chekuzivikanwa kweHGH mune zvemitambo ndiko kukwanisa kuderedza kuwanda kwemafuta echidiki. Mukuwedzera, zvidzidzo zvakaratidza kuti kutora hormone kukura kunowedzera kuwedzera kwemaviri musimba, zvinogadzirisa mishonga uye kuwedzerwa kuwanda kwemasero masero nekuda kwekuwedzerwa kwemvura.
Imwe nzira inobatsira yekukura kwehomoni - kuderedza kuwanda kwekukuvara. Izvi zvinokonzerwa nekukwanisa kwaro kusimbisa bone nekubatanidza (tendons, cartilage) mhuka. Kukura kwehomoni kunowedzera kuporesa uye kuchinja patsva shure kwekukuvara.
Izvo zvinofanira kuonekwa kuti kushandiswa kweHGH mu powerlifting hakuna maturo, sezvo mukuedza kwakawanikwa kuti haina kuwedzera simba rekushanda. Somatotropin inowedzerawo simba uye kushanda, uye zvinopesana, kuderera kwechikumbaridzo chekuneta nekuderedza kupora, saka kuwedzera hormone hazvina maturo kune vatambi vemitambo yakadaro, apo idzi zviratidzo.
The General conclusion ndeyokuti kukura kwehomoni kunogona kushandiswa mumitambo nechinangwa chokuwana zororo.
Kushanda kwepamusoro, kuderera kwemigumisiro yemigumisiro, chirwere hachina kukanganisa basa repenisi uye simba haina kuita kuti androgenic zviiti uye hazvidi kuti PCT mushure memwedzi wepamwedzi wehuwandu huwandu hwakawedzera zvishoma (3-4 kg), uye Mune zvimwe zviitiko kwete zvachose kuchinja kunobatanidza nekurasika kukuru kwemafuta.
Iyo yakadhura madhiragi ndeye 2-3 mazana madhora padzidzo.
Zvimwe zvinokonzerwa nekukura kwevanhu hormone
Nemhaka yokuti HGH inoberekwa zvakasikwa mumuviri womunhu, migumisiro yeHGH haigoni. Zvose zvinowanzoitika munharaunda idzodzo apo kukura kweHormone kunoshandiswa mumitengo yakakwirira kudarika kukurudzirwa uye nguva yakareba kupfuura yakataurwa nenyanzvi. Mukuita, pane zvinotevera migumisiro yekukura kwevanhu Hormone (kuwanda kwezvakaitika):
Tunnel syndrome Inoratidzwa nekurwadziwa uye kushaya simba mumigumo. Izvi zvinokonzerwa nekuti kuwedzera kwemazana emasumbu kunomesa nhengo dzomukati. Iyi yechipfubu haisi nengozi uye inokurumidza kugadziriswa mushure mekuderedza chiremba.
Kuunganidzwa kwemvura inotonhorera, kusingabatsiri, kune huwandu hwehutachiona huri mumisungo, zvichivapa hukuru hukuru uye hutsika. MuchiGarire, zvishoma zvishoma zvinoshandiswa phenomenon mushure mekuguma kwechikoro.
High blood pressure - inobviswa kana kuderedzwa kwechirwere cheHGH, kana kushandiswa kwemishonga inopesana nemishonga.
Kuvhiringidzika kwebasa rehutachiona hwehutachiona - hunofunga hazvizviratidzi, nokuti kudzvinyirira kwakanyanya. Nokuda kwayo kubviswa uye kuwedzerwa kushanda kwepurogiramu inoshandiswa Thyroxin pamutengo we 25 mcg pazuva. Mushure mekuregererwa kwekukura kwehomoni, utachiona hwehutano hwakadzorerwa zvakakwana.
Hyperglycemia - kuwedzerwa kwezinga rehuga muropa. Yakabvisa insulini kana zvinodhaka zvinokurudzira pancreas (gliclazide). Hazviwanzodi kutora matanho ekuwedzera uye inoshandiswa zvakakwana. Iwe unogonawo kutora zvinowedzera neAlpha lipoic acid, inodzorera insulin senzwi.
Acromegaly - chirwere ichi chinoitika nekuda kwekutaura kushandiswa kwemishonga yekukura hormone. Kana yakashandiswa zvakanaka, haigoni kuwanikwa.
Hypertrophy yemwoyo nedzimwe nhengo dzinowanikwa bedzi munyaya yekushandiswa kwenguva refu kweHGH mumitambo mikuru. Kana yakashandiswa zvakanaka, haigoni kuwanikwa.
Nhema dzemufaro yekukura kwehomoni
Kuwedzera mudumbu - inowanzowirirwa kuti kukura hormone kunogona kuwedzera mimba nekuda kwe hyperplasia yezvomukatikati (sezvakaitwa mumatumbo uye nhengo dzakagamuchira IGF-1). Ikozvino hapana huchapupu hwezvesayenzi hwechokwadi ichi, zvisinei, mienzaniso yakajeka yekushanduka kwemuviri mumamiriro ezvinhu evakadzi vekugadzira masangano vanobatanidzwa naro. Zvisinei, ruzivo runobatsira rwevatambi vakawanda rinoratidza kuti mapoka ezvokutanga ekukura kwehomoni haatungamiri kukura kwemuviri. Nyanzvi dzinofunga kuti kuwedzera kwemuviri (mumutauro weChirungu Internet inowanzoreva "GH gut") kune zvimwe zvinokonzerwa nemakemikari uye zvinokwanisika kana ukashandisa maitiro makuru eGH pamwe chete ne insulin, steroid, pamwe chete nekushandiswa kwemari yakawanda Zvekudya.
Kukanganisa pamusoro pehutano nekushanda kwepenisheni - HGH haina matanho akaipa pane zvepabonde.
Kuregererwa kwekuvhara kwekukura kwehomoni - Purofesa Elmer M. Cranton, MD yakaita chidzidzo kune vanopfuura 100 varwere, izvo zvisingawanikidzi kudzivisa kuchengetedza kwayo.
Kanzura - kukura hormone kunokonzera kukurumidza kunoshamisa kwekuparadzaniswa kwemasero emarara, saka vatsvakurudzi vanonetseka nezvekuwedzera kwehomoni kune musimba. Paiva nedzidzo yekudzorera, iyo yaipindwa nevanhu vanobatwa nekurasima hormone, iyo nguva yakawanda yehutachiona hwehutachiona iyo haisi yakasiyana zvakasiyana nevamwe vose vanogona kutaura pamusoro pokusavapo kwemakemikari emigumisiro yekukura kwehomoni.
The General conclusion pamusoro pemigumisiro
Kukura kwehomoni hakuwanzokonzera migumisiro yechirwere kana inoshandiswa muyero yakawandisa. Zvinenge zvose zvinokonzerwa nemigumisiro inoshandiswa. Panguva imwe chete, zvakaratidza zvakajeka kuti kugadzirira kweHGH kunogona kugadzirisa muviri kuti uvandudze utano mumuviri, kuderedza zvakaipa cholesterol, kuvandudza ganda, kusimbisa mapfupa uye mimwe midzi nezvimwe zvizhinji zvinobudirira.
Izvo zvakanyanya kurongedza kuchengetedza kwekukura kwehomoni-peptide hormone ye hypothalamus (somatostatin uye somatoliberin), iyo yakavanzwa neurosecretory masero e hypothalamus mumasango emasuo epituitary uye anoita zvakananga pane somatotrope. Zvisinei, muyero wehomoni idzi uye pamusana pekukura kwehomoni inobatwa nehupenyu hwakawanda huripo. Masayendisiti ave akaratidza kuti hutachiona hwekukura kwehomoni hunogona kuwedzerwa ne 3-5 nguva, pasina kushandisa mahomoni.
Peptides ndiyo inonyanya kukurudzira yekutakura hormone, kuwedzera mujeri 7-15 nguva iyo mari yekambani yakaenzana kazhinji pasi apa:
Kukura hormone uye peptides mukuvaka muviri
Peptides (Kubva muchiGiriki. Πεπτος - kudya) - mhuri yezvinhu izvo maamolekemu akavakwa kubva kune zvakasara zve α-amino acids zvakabatana muketani peptide (amide) zvisungo. Izvo zvakasikwa kana zvigadzirwa zvinosanganisira makumi, mazana kana zviuru zveMonomeric units - amino acids. Chikoro ichi chakasiyana chaizvo uye chinoita mumuviri zvakasiyana siyana zvekutonga mabasa. Muchikamu chino tichakurukura chete avo peptide inoshandiswa mumitambo yekugadzirisa zviratidzo zvenyama.
Pari zvino pamusika we Tairendi Kakawanda kazhinji pane peptides, izvo zvinokurudzira kuwedzera hormone. Mapeptide anozivikanwa zvikuru mukuvaka muviri muThailand:
Kubva muboka reGhrelin (GHRP): (tanga zita rakataurwa GR peak concentration pakarepo mushure mejojo, zvisinei nokuti nguva yezuva uye kuvapo kwe somatostatin muropa).
GHRP-6 uye Hexarelin
Kubva muboka rekukura kweHormone rinobudisa hormone (GHRH): (kuiswa mumuviri kunokonzera kuwedzera-kufanana kwakafanana mukusanganiswa kweiyo kuchave kusina simba mumaawa apo kuchengetedza kwepachivande kwe GRS kwakaderedzwa ne somatostatin, uye yakakwirira munguva yepanyika Kuwedzera mumatongerwo eG (semuusiku usiku) Mune mamwe mazwi GHRH inowedzera kuchengetedzwa kweBSS, pasina kuvhiringidza maitiro ehupenyu.)
HGH Frag (176-191) Chikamu chekukura kwehomoni (mafuta anopisa)
Mibvunzo yakawanda inomuka, sei uchishandisa peptide itsva yezvinhu, kana pane chimiro chekuwedzera kwevanhu hormone? Mhinduro yacho iri nyore: peptide zvinokurudzira zvine maitiro akawanda anobatsira.
Peptides inokosha kudarika kukura kwehomoni. Izvo zvinodhura zvedzidzo imwechete zvichange zvichingoverengeka zvishoma.
Nzira dzakasiyana-siyana dzekuita uye hafu-hupenyu dzinotibvumira kuti tishandise mutsara wekutengesa wehutano hwakanaka hwevanabolic.
Zvimwe zvinokonzera nzara uye metabolism, zvinokubvumira kuti upe zvinodiwa kune izvo kana zvimwe zvinhu.
Panguva iyo kuburitsa uye kuparadzirwa kwemapeptide haisi kutongerwa nemutemo, saka zvakachengeteka kuronga paIndaneti.
Nokukurumidza uye zvakanyunguduka zvachose, saka hapana kutya kune doping control.
Peptides, pamwe chete nekakurumbira kukura hormone zviri nyore kutarisa kutendeseka. Zvakakwana kupfuurira miedzo pazinga re somatotropin mu plasma mushure mekushandisa zvinodhaka.
Kufananidza mafundo aya kukura hormone?
Kukura kwehomoni kunogona kushandiswa nevarume nevakadzi pamusoro pemakore e20 (vanhu vaduku vakawanda vanogona kunge vachiona kukura kwemafupa) kusimbisa hukuru hwemutsara. Misi yose inowedzera zvishoma, izvi zvinoitika semugumisiro mukuru Kurasikirwa kwemafuta.
Zvimwe zvikanganiso panguva uye mushure mokunge zvidzidzo zvisingaonekwi, zvinowanzodzokororwa.
Nzira yacho inopesana neyevanhu vane chirwere cheshuga (kukura hormone inowedzera kuwanda kwehuga muropa), chenjerera inofanira kushandiswa muhutachiona (kukura kwevanhu hormone kunogona kukuwedzera). Usati watanga kushandisa mushonga unofanirwa kubvunza chiremba.
Top 3 yakakurumbira HGH muThailand